I mahazo hevitra ihany HIDITRA
Important I mahazo hevitra ihany HIDITRA
2 taona 4 volana lasa izay #516 by JanneAir15
Salama! Efa nahatsikaritra fa rehefa namorona ny foto-kevitra (toy izany) aho tsy nahazo ny 10 hevitra izay no tokony hahazo rehefa mamorona lohahevitra na ireo zavatra hafa toy ny fandefasana fanehoan-kevitra, na mamaly maherin'ny 150 tarehin-tsoratra ny lahatsoratra. Dia naniraka tapakila ho an'ny mpiasa fa te-hangataka koa ny avy eto. Koa afaka manampy ahy ianao, azafady?
2 taona 4 volana lasa izay #540 by Colonelwing
Yeah aho ,, jereo fa ny frantsay koa Forum toerana no manome hevitra ...
Angamba zavatra tsy miasa tsara eo amin'ny rindrambaiko mecanic.
2 taona 4 volana lasa izay #561 by Gh0stRider203
Aho hilaza izany amin'ny mpampiasa
2 taona 4 volana lasa izay #563 by Dariussssss
Mba hahatongavana ho marina, tsy tsikariko akory fa ... izany no maha zava-dehibe ahy. Tonga eto aho haka ny planeta tsara indrindra FSX etsy sy eroa eto amin'ny Forum, hanampy amin'ny olana sy hifalifaly ao anatin'ity vondrom-piarahamonina mahavariana ity, izay tena mihalehibe, toa ny isan'andro .... tsy hanangona teboka sasany ...
BTW, inona ny fampiasana ireo hevitra ireo?
2 taona 4 volana lasa izay #564 by Gh0stRider203
RAHA miakatra ho any ny anaranao, ary avy eo dia Goto ny Points hahita izany teo amin'ny efijery-dia miakatra ..
Hevitra mba hanangona Jumbo famandrihana maimaim-poana.
Jumbo 1 volana famandrihana = 1 000 pts, 3 volana = 2 000 pts, 6 volana = 3 500 pts, 12 volana = 5 500 pts
Misaotra anareo nandray: 2
2 taona 3 volana lasa izay #611 by Kyrelel
Toa manondro fa ny logon intsony hitranga, sy ny "Ny Points" safidy dia efa nesorina - ankehitriny, tsy maintsy handoavana ny Jumbo? Nanana (Heveriko fa) efa ho 2500 hevitra.
2 taona 2 volana lasa izay #656 by Rolando
Mety ho tsara ny mahazo ny vaovao momba izany!
2 taona 2 volana lasa izay #657 by Gh0stRider203
Rolando nanoratra hoe: Ho tsara ny mahazo ny vaovao momba izany!
Tsy mahalala izay tokony hilaza ya, fa. Toa intsony isika mahazo isa noho ny manao zavatra eto. Aho toy ny ao amin'ny maizina tahaka anao ihany.
2 taona 2 volana lasa izay #658 by rikoooo
Efa kilemaina rafitra ny hevitra satria nanana olana ara-teknika be loatra izany, na izany aza, ao amin'ny Futur mba hampiasa azy io indray raha mahazo mitaingina ny bibikely.
Raha nanana hevitra mihoatra ny 1000 ianao mbola afaka manontany ahy maimaim-poana Jumbo famandrihana, ka ny hevitra tsy very maina.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
2 taona 2 volana lasa izay #659 by Gh0stRider203
Aho ho nahita angamba fa akaiky Raha tsy malfunctioning LOL
Fotoana mamorona pejy: 0.352 segondra